Politika avokoa izay mihetsika rehetra | NewsMada
Politika avokoa izay mihetsika rehetra
Politika avokoa izay mihetsika na atao rehetra amin’izao? Tandindomin’ny fifidianana 2018 ny sasany. Amin’izany, na manahy olona ny tena, na ahin’ny olona. Tsy misy intsony izay fifampitokisana, na amin’izay lalàna tokony hiombonana sy hampiombona ihany aza. Samy manao ny ataony tsinona.
Vokany, tsy mazava intsony ny fandehan-draharaha: misavorovoro, samy manana ny fijery sy fandikany azy avy. Misy ambadika politika na azo adika ho antony politika ve, ohatra, ny fisavoritahan’ny ray aman-drenin’ny mpianatra tamin’ny tsaho hoe misy andian’olona manao vaksinina pesta?
Paipaika sy kajikajy politika koa ve, ohatra, ny amin’ny fahaverezan’ny “boky” mirakitra ireo didim-pitsarana momba ny heloka bevava, taona 2010, ao amin’ny fitsarana, Anosy? Efa politiky ny politika ny fomba fijery sy fisaina, hany ka izany avokoa ny antony sy vokatr’izay miseho rehetra.
Nahoana loatra? Hatramin’izao, tsy hita be ihany izay hoe fampandrosoana ataon’ny mpitondra. Na misy tokoa aza izany, mbola ambadika politika ihany. Fitokanana EPP narenina, fa tsy vao naorina, avy, ohatra, ka nirodorodoan’ny fitondram-panjakana toy ny hoe tsy mbola nisy toy izany.
Tsy inona fa fisehosehoana sy fisekosekoana hoe miasa ho an’ny vahoaka. Tena misitraka inona amin’izao fitondrana izao ny vahoaka manerana ny Nosy? Amin’ny fihatsaram-piainana andavanandro, ohatra, na fanamaivanana ny fahasahiranana, na fampanjakana ny fandriampahalemana… ?
Mila porofo sy aseho ve izany vao hita? Ny diso no mila hamarinina, ny mampiahiahy no mila porofoina, ny tsy misy loatra no mila aderadera… Tsy fampandrosoana izao no atao fa politika. Tandindomin’ny fifidianana 2018. Na tsy misy ny politika fampandrosoana mazava, ka misehoseho foana.
Mbola hisy hojambena amin’izay endri-javatra mamirapiratra iray na roa ny besinimaro ao amin’izao haizin’ny fahantrana lalina sy maharitra izao? Na hanao maso voatoto-tany amin’ny fandrika sy fitaka eo anoloany, ka tsy hahajery lavitra intsony… Politika avokoa izay mihetsika rehetra tsinona.